Famahanana ny atin'ny bibi-dia amin'ny Rallyverse | Martech Zone
Zoma, Febroary 8, 2013 Alakamisy Febroary 7, 2013 Douglas Karr
Ireo orinasa manana paikady atiny lehibe dia tsy mametra ny lanjan'ilay fandaharan'izy ireo amin'ny atiny nosoratany irery. Misy atiny marobe mamely ny tranonkala isaky ny segondra ... misy tsara, misy kosa ratsy. Ny fahaizana miditra ao amin'io firehose io, mamoaka ireo vatosoa ary mizara izany amin'ny mpihaino anao dia tombony lehibe lehibe noho ireo mpifaninana aminao. Raha lasa loharanom-pahalalana voalohany ho an'ny vinavinanao sy ny mpanjifanao ianao dia tsy mila mijery any amin'ny toerana hafa intsony!
Mamily lalana mahafantatra ny maha-zava-dehibe ny feo marika marina sy mahasarika ao amin'ny media sosialy. Ny sehatr'izy ireo dia mahita sy manafoana ny atiny avy amin'ny loharano sy ny lohahevitra nofidinao, ary manamora ny fampidiran'ny vondrom-piarahamonin'ny marika sy ny ekipa marketing anao ny zava-misy sy ny fomba fijeriny ireo vaovao farany. Ny interface misy azy ireo dia mitovy amin'ny pinterest ary mora ny manivana sy mandany votoaty marobe:
Raha vantany vao hitanao ny atiny izay tianao zaraina amin'ny mpihaino anao dia tsotra ihany ny fizarana. Mamily lalana manome ny fomba fiasa hanambatra haino aman-jery roa karama sy tompony ao anaty paikadin'ny media sosialinao koa. Ireo mpanjifan'izy ireo izay nanao fampielezan-kevitra niaraha-nahita dia nahita ny fiakaran'ny vokar'izy ireo tamin'ny 13X, ary ny isan'ny olona miresaka momba azy ireo dia nitombo tamin'ny 21X.
Nisy ihany koa ny fanolorana Robost tatitra. Ho fanampin'ny fanarahana ny fitomboan'ny fiarahamonina misy anao, Mamily lalana Ny tatitra dia ahafahanao mizaha ny fahaizan'ny hafatra tsirairay:
Fijery famintinana izay manome anao ny antontan'isa fampisehoana ao amin'ny Twitter sy Facebook, ary koa ny fomba fijery amin'ny antsipirihany ho an'ireo tambajotra roa.
Ny singa tsirairay amin'ny fampisehoana dia soratana amin'ny kisary famintinana eo an-tampon'ny pejy, ary koa amin'ny fijerena latabatra amin'ny antsipiriany. Azonao atao ny manasokajy ny angona isaky ny tsanganana eo amin'ny latabatra.
Ao amin'ny Twitter, manara-maso ny tsindry amin'ny rohy tsirairay apetrakao izy ireo ary koa ny isan'ny mpanaraka anao vaovao azonao amin'ny alàlan'ny lahatsoratra tsirairay.
Ao amin'ny Facebook, manara-maso ny tsindry, ny tiany, ny fanehoan-kevitra ary ny fizarana azonao ireo isaky ny lahatsoratra ianao.
Izahay koa dia manolotra famintinana haingana ny intelo andro voalohany izay nahatonga ny fandraisana anjara betsaka tamin'ny lahatsoratra tsirairay.
Tags: curationContent MarketingcurationFacebookLinkedInrallyversehaino aman-jery sosialyTwitter
8 Feb 2013 tamin'ny 10:19 maraina
Misaotra tamin'ny lahatsoratra tsara, Douglas. Faly izahay ny amin'ny ho avy!
8 Mey 2013 tamin'ny 12:14 hariva
Amin'ny maha orinasa na marika ahy, maninona aho no tsy te-hitarika fifamoivoizana betsaka amin'ny tranokalako, mifanohitra amin'ny hafa, araka izay tratra? Mazava ho azy fa misy tranga fampiasana an'io ary afaka manaparitaka ny entanao ianao tontolo andro fa toa ny mandany antsasaky ny fotoana hampiasanao an'ity rafitra ity mba hamerenana fotsiny sy hananganana ny sasany amin'ireo atiny ao amin'ny tranokalanao ary handefa ireo rohy ireo dia handeha lavitra kokoa noho ny mampifandray amin'ny hafa. Very fototra tanteraka ve aho?
8 Mey 2013 tamin'ny 12:38 hariva
Heveriko fa ireo orinasa izay tsy miresaka momba ny atiny izay sarobidy amin'ny mpihaino azy ireo satria manahy izy ireo sao ny mpamaky handeha any an-kafa dia milalao lalao mampidi-doza. Raha tsy manome ny sanda rehetra azo atao izy ireo dia mety hanary ny fahatokisana sy ny mpanjifa tanteraka. Ohatra, andao lazaina fa ny orinasan-kaontinay dia mahita zavatra ao amin'ny kaody vaovao momba ny hetra izay nohazavaina tanteraka tamin'ny tranokalan'ny mpifaninana aminy. Mazava ho azy fa afaka mamerina manamboatra ny atiny fotsiny izy ireo (raha manana loharanom-pahalalana hiezaka ny hitandrina ny tontolo andro izy ireo), na afaka nametraka bitsika tsotra izy ireo, "Ny kaonty ABC dia nanondro fanavaozana kaody manan-danja tokoa, mifandraisa aminay raha tianao te hifanakalo hevitra momba ny fiatraikany aminao. " - Ho very ny mpanjifa ve? Sa nampitombo ny lanjan'izy ireo ho an'ny mpanjifa fotsiny? Eto amin'ny Blog Technology Technology, ireo vondrom-piarahamoninay roa - Blogging Corporate sy Blog Technology Technology - dia vaovao sy vaovao voarainay avy amin'ny loharano hafa. Mahatonga antsika ho sarobidy tokoa amin'ny fiarahamonintsika. Ary tsia, tsy mino aho fa hahavery mihoatra ny azontsika. Ny ifantohanay dia ny fanomezana lanja ny mpihaino anay.
Fanampin'izay, raha ny momba anay dia ampy ny orinasa handehanana! Miara-miasa amin'ny ankamaroan'ny mpifaninana aminay amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa izahay.
8 Mey 2013 tamin'ny 12:46 hariva
Teboka tsara manodidina. Ny fifangaroan'ireo paikady roa angamba no tsara indrindra. Mamorona atiny manokana tsy manam-paharoa ary miankina amin'ny manam-pahaizana momba ny indostria raha mila fanazavana fanampiny manome lanja.
8 Mey 2013 tamin'ny 1:04 hariva
Izay indrindra! 🙂